လာမယ့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ဗီလာနည်းပြအဖြစ် စတီဗင်ဂျရတ် ခန့်အပ်ခံရဖွယ်ရှိ – Play Maker Sports Journal
လာမယ့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ဗီလာနည်းပြအဖြစ် စတီဗင်ဂျရတ် ခန့်အပ်ခံရဖွယ်ရှိ
စတီဗင်ဂျရတ်ဟာဗီလာနည်းပြရာထူးအတွက်အပြီးသတ်ဆွေးနွေးရန် လန်ဒန်ရှိမီးရထားဘူတာသို့ရောက်နေပုံကို Ibrox Channel Exclusive! ကတင်လာပါတယ်။ဂျရတ်ဟာဘီးပါ အနက်ရောင် Suitcase ဆွဲလာသလို လက်တစ်ဖက်တွင်လည်းဝတ်စုံတစ်စုံဆွဲလာတာတွေ့ရပါတယ်။
လာမယ့္နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ဗီလာနည္းျပအျဖစ္ စတီဗင္ဂ်ရတ္ ခန႔္အပ္ခံရဖြယ္ရွိ
စတီဗင္ဂ်ရတ္ဟာဗီလာနည္းျပရာထူးအတြက္အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးရန္ လန္ဒန္ရွိမီးရထားဘူတာသို႔ေရာက္ေနပုံကို Ibrox Channel Exclusive! ကတင္လာပါတယ္။ဂ်ရတ္ဟာဘီးပါ အနက္ေရာင္ Suitcase ဆြဲလာသလို လက္တစ္ဖက္တြင္လည္းဝတ္စုံတစ္စုံဆြဲလာတာေတြ႕ရပါတယ္။
ပေါ်တူဂီ ၂ ဂိုးပြတ်မှာပါ